Bilaogera Espaniola, Zarao Miaraka Amin’ny Global Voices Amin’ny Alalan’ny #LunesDeBlogsGV Ny Lahatsoratrao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2014 2:38 GMT
Mankafy bilaogy izahay ato amin'ny Global Voices, saingy aleo tsorina. Noho ny fihanaky ny tambajotra sosialy, dia lasa any an-damosina ny bilaogy. Marobe ireo bilaogy mahaliana, saingy sarotra ny mahita azy ireo. Ary mahamenatra izany, satria marobe ireo votoaty mahaliana ao amin'ny aterineto izay tsy mba mandalo akory ao amin'ny tontolon'ny tambajotra sosialintsika. Inona no azontsika atao hamahana izany?
Nahare izahay fa tsy misy zava-baovao tsara fantarina. Mety ho marina izany, indrindra amin'ny fotoanan'ny kolontsaina malalaka sy ny fifangaroana. Andro vitsy lasa izay, tafahaona tamin'ity sioka ity isika:
Nanangana ny #MondayBlogs (BilaogyAlatsinainy) mba hanampiana ireo bilaogera hizara lahatsoratra isaky ny Alatsinainy aho. Mandraisa anjara isaky ny Alatsinainy, zarao ny lahatsoratra, ampitao (RT) ny siokan'ny hafa. #easy (tsotra)
Ary raha manontany tena isika hoe, maninona raha atao mifanaraka amin'ny Espaniola izany? Izany no nahateraka ny #LunesDeBlogsGV [Alatsinain'ny bilaogy ao amin'ny GV]. Tsotra ny hevitra ary afaka mandray anjara ny rehetra:
- Bilaogera ve ianao? Afaka mizara ny lahatsoratrao vaovao miaraka amin'ny diezy Twitter #LunesDeBlogsGV ao amin'ny Twitter na Facebook ianao!
-Mamaky bilaogy ve ianao? Afaka mizara ireo lahatsoratra avy amin'ny bilaogera ankafizinao amin'ny alalan'ny diezy Twitter #LunesDeBlogsGV ao amin'ny Twitter na Facebook ianao!
– Mpandrindra na ao anatin'ny fikambanana bilaogera ve ianao? Azonao zaraina ao amin'ny Twitter na Facebook ireo lahatsoratra avy amin'ny fikambanana misy anao amin'ny alalan'ny diezy #LunesDeBlogsGV !
Bilaogy, sary avy amin'i Julen Iturbe-Ormaetxe tao amin'ny Flickr, nahazoan-dalana ny sary voaaro amin'ny zon'ny mpamorona Attribution-ShareAlike 2.0 Generic license (CC BY-SA 2.0).
Ahoana ny fomba fandraisana anjara?
Izao no tena ilaina tsy maintsy ataonao:
-Isaky ny Alatsinainy, mandrisika ireo bilaogera miteny Espaniola mba hizara ny lahatsoratr'izy ireo ao amin'ny tambajotra sosialy (Twitter, Facebook) miaraka amin'ny diezy Twitter #LunesDeBlogsGV. Raha manamarika anay ao amin'ny Twitter ianao dia @GVenespanol na tsaratsara kokoa tondroy na mariho ao amin'ny Facebook izahay.
-Mandritra io andro io, ny GV-ES ao amin'ny tambajotra sosialy, dia hizara zavatra rehetra nalefa tamin'ny alalan'ny #LunesDeBlogsGV (ankoatra izay votoaty manaratsy (manala-baraka) na dokambarotra madiodio).
-Ny Talata hatramin'ny Zoma, hisy ny lahatsoratra fohy ahitana tsongam-pitenenana avy amin'ireo lahatsoratra nozaraina tsara indrindra.
Mikasika ny fepetra fifantenana ireo lahatsoratra hotsongaina, hosafidianay kokoa ireo lohahevitra mahavantana anay ato amin'ny Global Voices, saingy ho ampidirinay ihany koa ireo lahatsoratra miresaka lohahevitra hafa voasoratra tsara ary mety hahaliana ny mpamaky.
Na izany na tsy izany, tokony ho orizinaly avokoa ny lahatsoratra rehetra, tsy raisinay ireo lahatsoratra mamoaka indray ny votoatin'olon-kafa, na avy amin'ny bilaogy na media hafa..
Satria ankafizinay ny famokarana votoaty amin'ny alalan'ny lahatsary, homenay lanjany ihany koa ireo lahatsary bilaogy orizinaly.
Tsy misy famerana ny mikasika ny toera-ponenana, toera-nahaterana na zara hasinora (fuseau horaire). Fa afaka mandray anjara avokoa izay rehetra miteny Espaniola. Mazava ho azy fa nosoratana tamin'ny teny Espaniola, na amin'ny endriny manao ahoana na manao ahoana ny lahatsoratra… na koa amin'ny Espaniola-Englisy ny lahatsoratra zaraina rehetra!
Fikambanana bilaogera sasany tahaka ny Blogalia.com, Infotecarios, Mujeres Construyendo, Convergentes, Bloggers de Nicaragua, SocialTic ankoatra ny hafa no handray anjara hatramin'ny fanombohan'ny hetsika.
Tamin'ny Alatsinainy 5 Mey 2014 nandritra ny tontolo andro no nanombohana voalohany ny #LunesDeBlogsGV
Mandraisa anjara amin'ny #LunesDeBlogsGV !
Sary sy Hajian-tsary, noforonin'i Eva Domínguez…